Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: War Deg Deg Ah: Doodii Xildhibaanada ee Kiiska Qalbi Dhagax oo soo dhamaatay (Maxaa kasoo baxay)
September 21 2017 09:43:22
War Deg Deg Ah: Doodii Xildhibaanada ee Kiiska Qalbi Dhagax oo soo dhamaatay (Maxaa kasoo baxay)
Waxaa goordhaw soo dhamaatay doodii Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ka lahaayeen dhiibistii C/Kariin Qalbi Dhagax oo loo gacan geliyay dowlada Itoobiya iyo go;aankii Xukuumada kasoo saartay arintaasi.
Dooda Xildhibaanada ku yeesheen golaha Shacabka ah ayaa aheyd mid si gaar ah isha loogu hayay, waxaana Xildhibaanada argtidooda ka dhiibtay arintan ay ahaayeen kuwa taageersanaa Xukuumada Soomaaliya iyo kuwa kasoo horjeeday go'aankii Xukuumada.
In ka badan 50-Xildhibaan oo aragtidooda ka dhiibtay ajandaha kulanka ayaa si weyn u taageersanaa go’aankii Xukuumada Soomaaliya kasoo saartay Kiiska Cabdi Kariin Qalbi Dhagax oo kamid ahaa Saraakiisha sar sare ee Jabhada ONLF loona gacan geliyay Itoobiya.
Xildhibaanada ayaa intooda badan diiday qorshe ay wateen Xildhibaanada Xukuumada ku kacsan, kuwaa oo doonayay in Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya iyo xubno katirsan golihiisa Wasiirada looga yeero Baarlamaanka si su’aalo loo weydiio.
Waxaa sidoo kale meesha laga saaray Mooshinkii ay Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya diyaarinayeen, waxaana ajandaha kulanka maanta kaliya ahaa in la dhageysto dooda Xildhibaanada kadibna arintan guddi loo saaro si loo saxo waxii khaldanaa.
Guddoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa markii ay soo dhamaatay dooda Xildhibaanada sheegay in ay guddi u saarayaan arintan oo kasoo tala bixiyaan kadibna Xildhibaanada dib ugu soo celin doonaan natiijada talo bixinta.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in xubnaha Guddiga arinan loo xil saarayo ay dib ka soo sheegi doonaan, waxaana la filayaa in guddigan laga soo dhax xulo Xubnaha Guddiga joogtada iyo Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Dooda Kiiska C.Kariin Qalbi Dhagax ayaa noqotay mid si xoogan u taagneyd maalmihii lasoo dhaafay, Xukuumada Soomaaliya ayaana dadaal ku bixineysa sidii arintan loo soo afjari lahaa go'aankii ay gaartayna loo taageeri lahaa.